वातावरण मा हावा फ्लो को कारण के हो
वातावरण मा हावा फ्लो को मुख्य कारण - यो दबाव मा खस्छ वातावरण, केहि जमीन माथि छ जो। तल त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो घनत्व र अक्सिजन सन्तृप्ति छ। को आसन्न तहहरू अप भर्न tends जो निराशा हुन्छ, तल हीटिंग द्वारा महामण्डल पदार्थ उठाने जब। हावा र आँधीबेहरी दिन र साँझ तापमान परिवर्तन कारण उत्पन्न भएकोले।
हामी किन हावा चाहिन्छ?
त्यहाँ माहौल कारण मा हावा को कुनै आन्दोलन थियो भने, कुनै पनि जीव को अत्यावश्यक गतिविधि भएनन्। हावा बिरुवाहरु, जनावर पाल्नु गर्न मद्दत गर्छ। उहाँले बादल र धरती मा पानी चक्र मा एक प्रेरक शक्ति उत्प्रेरित गर्छ। कारण परिवर्तन जलवायु माटो र सूक्ष्मजीवहरु को क्षेत्रमा शुद्ध छ।
खाना बिना एक व्यक्ति केही हप्ता3दिन भन्दा लागि पानी बिना बाँच्न सक्छ र हावा बिना मिनेट छैन 10 भन्दा बढी। अर्थ सबै जीवन हावा जनता मिलेर बढन अक्सिजन मा निर्भर गर्दछ। यो प्रक्रियाको निरन्तरता सूर्य द्वारा समर्थित छ। दिन र रात ग्रह सतहमा मा तापमान मा उतार चढाव गर्न जान्छ।
हावा को एक वातावरणमा सधैं दबाव संग पृथ्वीको सतह मा थिचेर प्रति मिलिमिटर 1.033 ग्राम को एक आन्दोलन ठाँउ लिन्छ। मान्छे को यो ठूलो लगभग महसुस छैन, तर यसको तेर्सो आन्दोलन, हामी हावा रूपमा बुझ्ने। तातो देशहरूमा मा, समीर मरुभूमिमा steppes मा बढती scorching गर्मी देखि मात्र राहत छ।
हावा गठन गरिएको छ? रूपमा
वातावरण मा हावा फ्लो को मुख्य कारण - तापमान को प्रभाव अन्तर्गत तहहरू यस विस्थापन। विस्तार र चिसो को प्रभाव अन्तर्गत सम्झौता गर्न गरम गर्दा यसको मात्रा परिवर्तन गर्न ग्याँस गुण सँग सम्बन्धित शारीरिक प्रक्रिया।
वातावरण मा मुख्य र अतिरिक्त कारण हावा आन्दोलन:
असमान सूर्य को प्रभाव अन्तर्गत तापमान परिवर्तन। यो ग्रह को आकार (एक क्षेत्र को रूप मा) को कारण हुन्छ। पृथ्वीको केही क्षेत्रमा warms कम, अरूलाई थप। वायुमण्डलीय दबाव फरक बनाएको छ।
ज्वालामुखी eruptions नाटकीय हावा तापमान बढ्छ।
मानव गतिविधिको परिणाम रूपमा ताप वातावरण: मोटर र उद्योग देखि वाष्प उत्सर्जन ग्रह को तापमान उठाउनु।
रात कारण हावा आन्दोलन मा समुद्रहरू र समुद्र cooled।
अणु बम को विस्फोट माहौल मा dilution गर्न जान्छ।
ग्रह को महामण्डल तहहरू को आन्दोलन को संयन्त्र
वातावरण मा हावा को कारण असमान तापमान छ। पृथ्वीको सतह को गर्म पत्रहरू, माथिको उठ्नेछ जहाँ महामण्डल पदार्थ बढ्छ को घनत्व। हावा - यो जनता को redistribution एक अस्तव्यस्त प्रक्रिया सुरु हुन्छ। गर्मी बिस्तारै vibrational-translational गति मा उनलाई जान्छ जो, छिमेकी अणु दिइएको।
वातावरण मा हावा को कारण तापमान र महामण्डल पदार्थ को दबाव को सम्बन्ध छ। हावा रूपमा ग्रह को तहहरू को मूल सन्तुलित राज्य लामो जारी छ। तर यो अवस्था निम्न कारक हासिल कहिल्यै छ:
सूर्य वरिपरि पृथ्वीको Rotational र translational गति।
यो अपरिहार्य unevenness ग्रह क्षेत्रमा आत्मीय सम्बन्ध गाँसे।
जीवित कुराहरू गतिविधिहरु सीधा सम्पूर्ण इकोसिस्टमका स्वास्थ्य असर गर्छ।
पूर्णतया गायब पवन, यो सतह देखि हरेक जीवित प्राणीहरूको हटाउन, ग्रह रोक्न र सूर्य देखि छाया मा लुकाउन आवश्यक छ। यो वर्ष लाखौं मार्फत मानवता पर्खिरहेको: पृथ्वीको पूर्ण विनाश, तर सान्त्वनादायी गर्दा वैज्ञानिकहरू को भविष्यवाणी गर्दा यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ।
बलियो समुद्र समीर
वातावरण मा एक बलियो हावा प्रवाह गर्ने तटों मा अवलोकन छ। यो माटो र पानी असमान ताप कारण हो। कम गर्मी नदी, समुद्र, ताल, र समुद्रहरू। माटो सतह माथि महामण्डल पदार्थ गर्न गर्मी दिने, तत्काल गरम छ।
को गर्म हावा एकाएक छ माथिको rushes र परिणामस्वरूप नकारात्मक दबाब भर्न tends। र हावा घनत्व उच्च हुन्छ पानी को रूप मा, हावा को दिशा तट छेउमा गठन गरिएको छ। यो प्रभाव दिन मा तातो देशहरूमा विशेष राम्रो छ। रात समीर - राति, परिवर्तन सम्पूर्ण प्रक्रिया समुद्र भन्दा पहिले नै हावा को आन्दोलन अवलोकन गरेको छ।
वास्तवमा, यो समीर विपरीत दिशा प्रति दिन दुई पटक निर्देशन परिवर्तन, हावा भनिन्छ। समान गुण monsoons, तिनीहरूले जब समुद्र द्वारा वर्ष को उत्तेजक समयमा झटका, र चिसो मौसम मा - अलग भूमि।
हावा कसरी निर्धारण गर्ने?
वातावरण मा हावा फ्लो को मुख्य कारण - को असमान गर्मी वितरण। शासन प्रकृतिका सबै परिस्थिति लागि साँचो छ। पनि फुट्ने काम पहिलो गरम महामण्डल तहहरू छ, र त्यसपछि मात्र हावा rises।
vanes स्थापना वा द्वारा हासिल गर्न सकिन्छ सबै प्रक्रियाहरू जाँच, अधिक बस, झण्डा हावा प्रवाह गर्न संवेदनशील छन्। एक खुलेर घुमाउँदा उपकरणको समतल आकार उसलाई हावा मार्फत गर्न अनुमति छैन। यो महामण्डल पदार्थ को आन्दोलन को दिशा मा बारी गर्न खोज्छ।
हावा अक्सर महसुस शरीर, बादल, को धुवाँ चिम्नी। कमजोर यसलाई हेर्न गाह्रो बग्छ, यो एक भिजेको औंला आवश्यक छ, यो windward पक्षमा स्थिर हुनेछ। तपाईं पनि कपडा वा हेलियम भरिएको बेलुन को उज्यालो टुक्रा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले झण्डा को masts मा खडा गरिएको छ।
यो हवाई यातायात को मात्र होइन कारण, तर पनि यसको शक्ति, एक मात्रा मा निर्धारित छ जो छ:
0 अंक - निरपेक्ष शान्त हावा गति;
3 -5m / सेकेन्ड को मध्यम प्रवाह गर्न कमजोर;
46- बारे मा 12 मिटर / सेकेन्ड को हावा गति;
79अंक गर्न - voiced आँधी चेतावनी, 22 मिटर / सेकेन्ड सम्म गति;
8 12 अंक र माथि देखि - यो दूर भवन crumbling घरहरू बन्द पनि छतों, उड्ने, एक तूफान छ।
एक तूफान के हो वा Tornadoes?
आन्दोलन आँधी बादल को मिश्रित हावा प्रवाह हुन्छ। प्रति प्रवाह तंग बाधा हटाउन सक्षम छैन र क्लाउड मर्मज्ञ, उकालो निर्देशन। महामण्डल पदार्थ को clumps पारित, हावा तल पर्छ।
त्यहाँ बिस्तारै उपयुक्त हावा intensifying, एक घुमा प्रवाह हुँदा अवस्था अक्सर थपिएका छन्। हावा को तूफान बल र गति प्राप्त वातावरण सजिलै रेल ऊंची उडान भरना गर्न सक्ने यस्तो बन्नेछ। उत्तर अमेरिका प्रति वर्ष यस्तो घटनाहरुको संख्या मा नेता छ। Tornadoes जनसंख्याको लागि घाटा एक कारण लाखौं, तिनीहरूले जीवन को एक ठूलो संख्या बोक्न बन्न सक्छ।
अन्य विकल्प शिक्षा हावा
बलियो हावा सतह कुनै पनि शिक्षा, पनि पहाड मेटाउन सक्छ। netemperaturnoy मात्र प्रकारको गराउँछ हावा जनता को आन्दोलन एक विस्फोट छ। को महामण्डल पदार्थ को परमाणु शुल्क वेग को सञ्चालन पछि Motes रूपमा बहु-टन संरचना blows त्यस्तो छ।
meteorites ठूलो भंग वा पाप्रो गिरावट यदि बलियो हावा प्रवाह हुन्छ। यस्तै घटना भुकम्प पछि सुनामी समयमा अवलोकन थियो। को ध्रुवीय बरफ को पग्लिने माहौल पनि त्यस्तै भन्छ गर्न जान्छ।
साक्षात्कार को प्रकार: लाभ र पोल विभिन्न तरिकामा बेफाइदा
नोट - एक ... मानिसहरूले भनिन्छ टिप्पणीहरू रूपमा?
सीपी कम्पनी: साँचो मूलहरू लागि लेंस संग टोपी
अप्ठ्यारो: हवाईअन्तर्गत सधैं काम गर्दछ!
टुक्रा टुक्रा प्रतिरोध प्रतिरोध वर्ग: जो राम्रो छ?
जब नतालिया को जन्मदिन पार्टी? उद्भव मितिको इतिहास, मान र नाम को विशेषताहरु
सेभस्टियानो अलेक्जेंडर निकोटिच: जीवनी, उष्णकटिबंधीय सामग्री को संघीय सूची मा पुस्तकहरु